Booliiska dalka Thailand oo qabtay Doon kalluumaysi oo jarriif xoogan ka geysatay xeebaha Puntland | puntlandi.com
Thiland (Puntlandi) Booliiska dalka Thailand ayaa qabtay doon kalluumaysi oo ay saarnaayeen 22 qof isugu jira Thailandese iyo combodian. Doontaan ayaa ka timid xeebaha Puntland halkaas oo la sheegay inay ka haysatay shati ogolaansho kalluumaysi.
Balse baaritaankii booliiska Thailand waxaa lagu ogaaday in culayska kalluumaysi ee doontaan shatiga lagu siiyey uu ahaa inay qaadato kalluun dhan (270,000kg), laakiin doonta laga helay kalluun dhan (500,000 kilograms) taas oo khilaafsan wixii lagula heshiiyey ayna doontu samaysay xatooyo baahsan.
Sidoo kale saraakiisha booliiska Thailand xiriir ay lasoo sameeyeen saraakiil Puntand ah ayey sheegeen in loogu soo jawaabay inaysan doontaas aysan u diiwaan gashanayn oo aysan siin wax sharci kalluumaysi ah. Waxaa kaloo la xaqiijiyey in doontu aysan lahayn qalabka lagu aqoonsado doomaha sharciga ee loo yaqaan (vessel-monitoring system) .
Thailand waxay doontaan kuqaadaysaa dacwad ah inay kalluun sharcidarro ah dalka soo gelisay.